कोनपा ६ मा नेकपाको उम्मेदवार राम शसरण थारु
प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १७:३१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ को उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ । आगामी मंसिर १४ गते हुन गईरहेको उपचिर्वाचनकालागि नेकपाले राम शरण थारुले अगाडी सारेको हो । वडा सचिव समेत रहेका थारुलाई उम्मेदवार चयन गरी कोहलपुर नगर कमिटि र जिल्लालाई सिफारीस गर्ने निर्णय गरिएको वडा अध्यक्ष लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए ।
६ नं. वडा कमिटिका अध्यक्ष लक्ष्मण पाण्डेको प्रस्तावमा थारु सर्वसम्मत उम्मेदवारमा सिफारीश भएका हुन । थारु गत स्थानिय चुनावमा पनि वडा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । कोहलपुर ६ का वडा अध्यक्ष रामसोहन थारुको गत मंसिर ९ गते हृदयाघातका कारण निधन भएपछि वडा अध्यक्ष पद रिक्त रहँदै आएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा एक हजार ९६४ जना मतदाता रहेको उक्त वडामा हाल मतदाताको सँख्या दुई हजार २६ पुगेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार राम सोहन थारु ४२४ मत प्राप्त गरि विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका श्रीराम थारुले ३५२ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका रामशरण थारुले २७३ मत प्राप्त गरेका थिए ।
पुर्व एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेसँगै वडा नं. ६ मा नेकपाको जित सुनिश्चित भएको नेता कार्यकर्ताहरुको भनाई छ । दुवै उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा नेकपाको सहज जित देखिएको छ ।
नेकपा कोहलपुर नगर अध्यक्ष बसन्ती अधिकारीले वडाको सर्वसम्मत निर्णयलाई नगर कमिटिले अनुमोदन गरि जिल्ला कमिटिलाई सिफारीस गर्ने बताईन । उनले कोहलपुर वडा नं ६ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन हुनुले आफुहरु निर्वाचनमा बिजयी भै सकेको अनुभुति गरेको बताईन । उनले कोहलपुर वडा नं ६ को विकास नेकपाको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव रहेकाले सबै एकतावद्ध भएर निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिईन ।
कार्यक्रमा बोल्दै कोहलपुर नगर सचिव तुलाजार बिष्टले कोहलपुर ६ मा नेकपाको जित सुनिश्चित रहेको घोषणा गरे । उनले अघिल्लो स्थानिय तहको निर्वाचनमा अलग-अलग चुनावमा होमिएको दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एकता भई सकेको अवस्थामा जित टाढा नरहेको बताए । आफुहरु मंसिर १४ गतेको प्रतिक्षमा रहेको विष्ठको भनाई थियो ।